२२ बर्षिया छोरीको दुइटै मृगौला फेल भएपछि कान्छ्मानलाई सास्ती, युवा मञ्चले सुरु गरे सहयोग अभियान - Fonij Korea
लेखक: विमल सिं लामा | प्रकाशीत मिति: March 21, 2021
काभ्रेपलान्चोक तेमाल गाउँपालिका- ९ पालुघाटका ५९ बर्षिया कान्छामान तामाङ गाउँमै खेती किसान गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। दुःख गरेरै भएपनि छोराछोरीलाई अध्ययन गराए । ऋण गरेरै तीन छोरीहरुको बिबाह पनि गराइदिए । घरमा भएका छोराछोरी पनि आफ्नो खुट्टामा उभिने भइसक्यो भन्ने लागेको थियो उनलाई । सबैले गरी खाने भए पछि आफूलाई कसो सहयोग नगर्लान् भन्ने मनमा थियो । यसैमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि बिहान कमाएर बेलुकीको छाक टार्नुपर्ने कान्छामानलाई सास्ती पार्यो ।
यसमाथि २२ बर्षिया छोरीको दुबै मृगौला फेल भएपछि उनलाई ठूलो बज्रपात आइपर्यो । आफ्नो परिवारको छाक टारौं कि छोरीको उपचार गरौं ? ‘खै जेठो छोरा र कान्छी छोरीले काम त गर्छन् तर उनिहरु आफै खान मात्रै ठिक्क हुदोरहेछ । कान्छो छोरा भरखर ९ कक्षा पढ्दै छ । मेरो अब खेती बाहेक केही पेसा छैन । बिबाह गरेर पठाउनु पर्ने छोरी यस्तो भयो । मेरो आफ्नो छाक टार्न मात्र पनि गारो छ । कसरी उपचार गर्ने छोरीको ?’ आफ्नो दुखेसो पोखे कान्छमानले । ‘कसैले सहयोग गरे भने उपचार होला नभए खै कसरी बचाउन सकिन्छ र मेरी छोरी ?’ आँखा टिल्पिलाउँदै गला अबरुद्ध पार्दै भने ।
२२ बर्षिया रञ्जना तामाङ कलिलो उमेरमा नै दुबै मृगौला फेल भएपछि पर्ने मानासिक प्रभाव छदैछ । साथी संगीसँग खेल्ने घुम्ने रमाइलो गर्ने र आफ्नो सुनौलो भविस्यको सपना देख्नु पर्ने यो उमेरमा भक्तपुरको साँगुरो कोठा र अस्पतालको सैयामा सिमित हुनुपरेको छ । हप्ताको २ चोटि डायलिसिसको लागि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र जाने र भक्तपुरको कोठामा आएर त्यतिकै टोलाएर बस्नु बाहेक अरु कुनै बिकल्प छैन । हिजो संगै खेलेका र रमाएका सबै साथीहरु बाट टाढा भैसके अब । दुखाई धेरै भयो भने जतिखेर पनि अस्पताल डौडाउनु पर्छ । हप्ताको २ पटकको डायलिसिसको खर्च त सरकारले बेहोर्छ तर औषधि, खान र बस्ने खर्च कसरी जुटाउने ? खान्छामानलाई यसै कुराले बारम्बार सताइरहन्छ । मृगौला प्रत्यारोपणको त सम्भावना नै देखेको छैन उसले ।
कान्छामानको दुःखलाई पालुघाट गाउँकै केही युवाहरुले सुरु गरेको युथ फोरम पालुघाट(युवा मञ्च पालुघाट)ले थोरै भएपनि मलम लगाउने कोसिस गरेकोछ । मञ्चले अभियानको सुरुवात स्वरुप संकलित रकम रु ५०७०५ (पचास हजार सात सय पाँच) हस्तान्तरण गरेको छ । शनिबार (चैत्र ७) का दिन तेमाल ९ का वडा सदस्य कान्छ लामा र पत्रकार सुदिन लामा, लगायत अनलाइन कर्मिहरुको रोहवरमा उक्त रकम बिरामी रञ्जना तामाङ्को हातमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
संकलित रकममा ललिता लामा र निरमाया लामाको पहलमा १८ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ संकलन भएको थियो भने मञ्चले अफ्नो सदस्यहरु मध्येबाट थप संकलन गरि पहिलो प्रयास स्वरुप यसरी आर्थिक सहयोग गरेको अभियानता निमा छिरिङ लामाले बताए । साथै यो अभियान जारी रहने र सम्पुर्णमा सहयोग गर्नुहुन अर्का अभियानता सिंग बहादुर तामाङले आव्हान गरे ।
इच्छुक सहयोगी मनहरुले सहयोग गर्नका लागी बिरामीको दाइ हर्कमान लामा(9808460369) वा युवा मञ्च पालुघाटका अभियानताहरुलाई सिधै सम्पर्क गरेर पनि सहयोग गर्न सकिने छ ।
साथै मञ्चका सदस्य तथा सहयोग संकलन अभियानता पदम बहादुर लामाले दक्षिण कोरिया बाट पनि सहयोग संकलन अभियान संचालन गरेकाे छ । दक्षिण कोरियामा रहेका मनकारी सहयोगीहरुले Lama padam bahadur/IBK BANK- A/c no. 22142398102011 मा सहयोग गर्न सकिने जनाएको छ ।